Shoda Sushi 1013 views
ဒီလိုပူအိုက်တဲ့နေ့လယ်ခင်းလေးမှာ ထမင်းတွေလဲမစားချင်ဘူး…ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတစ်ခုခုပဲစားချင်မိတာ နောက်ဆုံးလသာဘက်ရောက်သွားတော့ Shoda Sushi ဆိုင်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီဆိုင်လေးကအေးအေး ဆေးဆေးပဲ နေ့လည်ဘက်ဆိုတော့လူသိပ်မရှိသေးဘူး ဒါပေမဲ့ စားနေရင်းနဲ့ပဲလူတွေတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ရောက်လာတာ ဆိုင်ထဲလူပြည့်သွားလေရဲ့… Menu List လေးကြည့်ရင်းနဲ့ မှာလိုက်တာ တူနာဆူရှီ၊ ဂဏန်းဆူရှီနဲ့ ပုဇွန်ကြော်… တော်ပြီပေါ့နော် တစ်ယောက်ထဲစားတာပဲ သိပ်မကြာဘူး… မှာထားတာတွေရောက်လာတရ် ဟန်နီ့အကြိုက်ပေါ့နော် ဗိုက်လဲဆာနေတာဆိုတော့…
‪#‎တူနာဆူရှီ‬ ဟန်နီမှာတာက ဆူရှီထဲလိပ်တာမဟုတ်ပဲ သုပ်ထားတာကိုအပေါ်ကတင်ထားတာ... တူနာအရသာကအရမ်းပေါ်လွင်တယ် တချို့လိုခိုတာတွေဘာတွေလဲမရှိဘူး… စားလိုက်တဲ့အခုတိုင်းမှာ အရသာကပြည့်စုံနေတယ်… (၁၀၀၀)ပဲရှိလို့စားရတာအရမ်းတန်ပါတယ်…
‪#‎ဂဏန်းဆူရှီ‬ အဲ့ကလဲဆိမ့်ဆိမ့်လေး…စားလို့အရမ်းကောင်းတရ်… ဟန်နီတော့အရမ်းကြိုက်တယ် grin emoticon တစ်ယောက်ထဲစားနေတာခေါင်းတောင်မဖော်နိုင်ဘူး ဟီး… တစ်ပွဲကိုမှ (၁၀၀၀)ပဲရှိတယ်… တော်တော်တန်တယ် အရသာလဲတော်တော်ကောင်းတယ်
‪#‎ပုဇွန်ကြော်‬ အဲ့ကတော့ဟန်နီ့အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်… ပုဇွန်လေးကိုအိနေတာပဲ…. မုန့်နှစ်လေးကလဲနူးညံ့တယ် စားလို့အရမ်းကောင်းတယ်မှအပ ဘာမှကိုမပြောချင်တော့ပါဘူး … ဒါက Shoda Sushi ဆိုင်ကိုစားဖူးတဲ့သူတိုင်းသိကြမှာပါ… ဒါနဲ့ ပုဇွန်ကြော်ကလဲတစ်ပွဲမှ (၁၅၀၀) ပဲရှိတာ…...
အဲ့ဒီဆိုင်က ပါဆယ်ဝယ်ရင်တော့ဝယ်လို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ စားပီးသားကျန်ရင်တော့ပါဆယ်မထုတ်ပေးပါဘူးတဲ့… နောက်ပြီး ဇွန်းမပေးပါဘူး… ဟင်းရည်တွေဘာတွေသောက်ချင်လို့ဇွန်းတောင်းရင် တူ ပဲပေးပါတယ် ပြီးတော့ ပန်းကန်ကိုပဲမော့သောက်ရတာ…
ကဲပါ… ဟန်နီစားဖူးတာလေးကိုမျှဝေပေးပြီးပြီနော်… အဲ့ဆိုင်ကလသာလမ်းထဲမှာရှိတာပါ… M2M အခွေဆိုင်ရဲ့အရှေ့နားမှာရှိတာပါ… သွားစားပြီးတဲ့သူတွေလဲအခြေအနေဘယ်လိုလဲ ပြောပြအုံးနော်….
Honey ( MyLann)